Guardiola, Mourinho, Deschamps Iyo Liiska Musharixiinta Tababarayaasha U Sharaxan In Ay Cristiano Ronaldo & Juventus Hogaamiyaan. | Laacib.net
Guardiola, Mourinho, Deschamps Iyo Liiska Musharixiinta Tababarayaasha U Sharaxan In Ay Cristiano Ronaldo & Juventus Hogaamiyaan.
Liiska musharixiinta tababaryaasha lala xidhiidhinayo kooxda Juventus ayaa hadaba sii badanaya kadib go’aankii ay maamulka Juventus maanta ku dhawaaqeen.
Kooxda Juventus iyo macalinkoodii Maxi Allegri ayaa laba dariiq kala raacay waxayna taasi albaabka u furtay in ay tababarayaal badani shaqadan u tartami karaan.
Juventus oo ka mid ah kooxaha saamaynta badan ee horyaalada Yurub ayaa markale ku soo fashilantay hamigoodii ahaa in ay ku guulaystaan tartanka UEFA Champions League.
Inkasta oo ay Juventus rajo badan qabtay kadib markii uu Cristiano Ronaldo ku soo biiray isla markaana ay isku arkayeen in ay Champions League hanan karaan markii ay afar dhamaadka soo gaadheen, haddana Ajax ayaa ceebta Old Lady banaanka keentay.
Kooxda Juventus ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay Maxi Allegri aanu kooxda sii maamuli doonin taas oo la micno ah in ay tababare magac wayn suuqa ugu jiraan.
Haddaba ayaa Massimiliano Allegri ka badali doona xilka tababaranimo ee kooxda Juventus oo Cristiano Ronaldo hogaamin doona?
Madax waynaha Juventus ee Andrea Agnelli ayaa hadda diirada saari doona in uu kooxda u magacaabo tababare uu u arki karo in uu Juventus ka caawin karo Champions League maadaama oo ay 8 xili ciyaareed oo xidhiidh ah soo hanteen Serie A oo ayna taasi muhiimad wayn ahayn.
Waxaa jira 7 tababare oo lagu soo qaaday magaca shaqada tababaranimo ee Juventus kuwaas oo ay ku jiraan macalimiin haddaba bilaa shaqo ah.
Antonio Conte oo ahaa macalinkii Juventus aas aaska u dhigay ee casriga dahabiga ah ayaa hadda ka mid ah liiska tababarayaasha ku soo baxay musharixiinta loo saadaalinayo in ay Maxi Allegri badali doonaan.
Antonio Conte ayaa tan iyo markii shaqada Chelsea laga caydhiyay waxa uu sugayay in uu qabto koox sare oo Serie A ah wuxuuna hadda haystaa fursada uu dib ugu soo laaban karo kooxdiisii hore ee Juventus.
Jose Mourinho oo isna laga caydhiyay Man United ayaa ku jira xaalad shaqo la’aan ah waxaana la filayaa in uu ku soo bixi doono tababarayaasha uu Andrea Agnelli kala dooran doono.
Tababaraha kooxda Ajax ee Erik ten Hag oo wacdaro soo dhigay ayaa lagu soo daray liiska musharixiinta Juventus loo saadaalinayo ee Maxi Allegri badali kara.
Guardiola oo waqtiyo badan lala soo xidhiidhinayay Juventus ayaa liiskan ku jira. Inkasta oo uu Guardiola dhawr jeer beeniyay in uu Juventus ku wareegi doono, haddana inuu ka soo shaqeeyay Spain, Germany iyo England ayaa keenaysa in loo saadaaliyo in Juventus noqoto kooxda uu Italy ugu wareegi karo.
Halkan kaga bogo Liiska Musharixiinta ilaa hadda loo saadaalinayo badalka Maxi Allegri Ee Juventus
1-Antonio Conte – Shaqo la’aan
2-Jose Mourinho – Shaqo la’aan
3-Erik ten Hag – Ajax
4-Didier Deschamps – Xulka France
5-Simone Inzaghi – Lazio
6-Pep Guardiola – Manchester City
7-Mauricio Pochettino – Tottenham